KENYA oo soo saartay amar aysan ku farxi doonin muslimiinta dalkaasi gaar ahaan Soomaalida |
KENYA oo soo saartay amar aysan ku farxi doonin muslimiinta dalkaasi gaar ahaan Soomaalida
Dowlada Kenya ayaa soo saartay amar albaabada loogu laabayo Dugsiyo qor’aan iyo Masaajid looga shakisan yahay in lagu xanaaneeyo Dagaalyahaanada cusub oo ay Al-shabaab sheegen inay dhawaan ka qorteen deegaano dhowr ah oo hoostaga dalka Kenya.
Masaajida iyo Dugsiyada la amray in la xiro, ayaa waxaa inta badan wax ku barta dhalinyaro Soomaali ah kuwaasi oo ay Kenya ku tuhmeyso kamid ahaanshiyaha Al-shabaab.
Xubin ka tirsan Wasaarada Amniga Kenya, ayaa cadeeysay in Dowlada Kenya ay soo afmeertay baaritaano ay ku heysay goobaha lagu barto Diinta Islaamka, waxa ayna xubintaasi sheegtay in Wasaaradu ay dooneyso inay albaabada u laabto dhowr Masaajid iyo Dugsiyo Qur’aan.
Nuqul kamid ah haddalka xubintaasi ayaa waxa uu u dhacay ‘’Kenya iyo Alshabaab ma wada noolaan doonaan waxa ay quwadu ku hareysaa hal dhinac, go’aankeenu waa inaan xirno Xarumaha carruurta lagu baro qur’aanka, Masaajida noo diiwaangishan iyo goobo kale oo aan weli ku heyno baaritaano’’.
Hanjabaadani ayaa timid kadib markii Dowlada Kenya ay walaac ka muujisay weerarada is xigxiga oo ay Maleeshiyadu ka geysaneyso gudaha iyo daafaha dalka Kenya.
Inta badan Deegaanada ku yaalla xuduuda Kenya iyo Deegaano dhowr ah ayaa waxaa buux dhaafiyay Maleeshiyaad farabadan oo ka tirsan Al-shabaab.